Danjiraha Ethiopia, u Joogi Doona Somaliya oo Lagu Soo Dhaweyey Muqdisho – Rasaasa News
May 20, 2011 ayaa si wayn loogu soo dhaweeyey caasimada dalka Somaliya ee muqdisho maalintii khamiista ahayd., Danjiraha cusub ee dalka Ethiopia u fadhiyi doona dalka Somaliya danjire Cabdicasiis Axmed, Danjiraha Ethiopia, u Joogi Doona Somaliya oo Lagu Soo Dhaweyey Muqdisho
Danjiraha cusub ee dalka Ethiopia u fadhiyi doona dalka Somaliya danjire Cabdicasiis Axmed Aden, ayaa si wayn loogu soo dhaweeyey caasimada dalka Somaliya ee muqdisho maalintii khamiista ahayd.
Danjire Cabdi Casiis Aden, waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey, xoghayaha guud ee wasaarada arimaha dibada ee dalka Somaliya Cabdi Daahir.
Danjiraha, ayaa waxaa loogu sameeyey xaflad soo dhawayn ah dhismaha weyn ee danaha dalka Ethiopia uu ku leeyahay magaalada Muqdisho.
Waxaa xaflada soo dhawaynta danjiraha Ethiopia ka soo qayb galay wasiiro iyo masuuliyiin sare oo ka tirsan dawlada dalka Somaliya.
Xoghayaha arimaha dibada ee dalka Somaliya oo ka hadlayey xaflada soo dhawaynta, ay ayaa uga mahad celiyey danjiraha, sida ay dawlada Ethiopia u gacan qabanayso dalka Somaliya, sidii uu dib cagihiisa isugu taagi lahaa.
“Dawlada Ethiopia, waxay kow ka tahay dalalka dariska ah ee jecel in ay Somaliya dib ula soo noqoto doorkii siyaasadeed ee ay aduunka ku lahayd, waana dhiiri galin aduunka kale in ay Ethiopia danjire u soo dirsato Somaliya,” sidaas waxaa yidhi Cabdi Daahir.
Wasiirka dhalinyarada iyo shaqaalaha ee Somaliya Nuur Macalin, ayaa sheegay in xidhiidhka labada dal u dhaxeeyaa uu gaadhay heerka ugu sareeya. Nuur oo ku maahmaahay af Ingriis ayaa yidhi “saaxiibka wanaagsan waa midka ku garab istaaga kolka aad goomoontahay tahay” “Ethiopia, dadka Somalidu iloobi maayo wanaaga ay u gashay xiligay dhibaataysnaayeen.”
Danjiraha cusub ee dalka Ethiopia, ayaa ah nin ka soo jeeda degaanka Somalida Ethiopia, mudo dheerna la socday arimaha siyaasadeed ee Somaliya.
Danjire Cabdi-casiis ayaa uga mahad celiyey dawlada iyo dadweynaha Somaliyeed, sidii diiranayd ee ay ugu soo dhaweeyeen Muqdisho.
Danjire Cabdi-casiis, ayaa la filayaa in uu qayb libaax ka qaadan doona xalinta siyaasada murugsan ee shariifyada Somaliya iyo dhismaha dawlad cusub oo ka dhalata Somaliya bisha Oktober.
Ethiopia, waxay ka mid tahay dalalka yar ee Afrikaanka iyo Eeshiyaanka ah ee ay danjireyaal u joogaan dalka Somaliya, kuwaas oo ay ka mid yihiin; Hindiya,Yeman, Sudan, Libiya, Masar iyo Jabuuti.
Dhismaha danaha dalka Ethiopia ee Muqdisho, ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah loo ilaaliyo ee u dhaw xarunta madaxtooyada Somaliya.